Banki-Moon oo Ergey cusub u soo Magacaabay Somalia – Radio Daljir
Nofeembar 24, 2015 1:19 b 0
Somalia, November 24, 2015 (Daljir) â€” Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-Moon ayaa shalay oo Isniin ahayd u magacaabay ergaygiisa gaarka ah ee Somalia, Michael Keating oo u dhashay dalka UK, isagoo bedeli doona Danjire Nicholas Kay oo hadda haya xilka maamulka xafiiska UNSOM.
Ergayga QM ee Soomaaliya Nicholas Kay ayaa waxayÂ shaqadiisu ku eg-tahay bisha nagu soo fool leh ee December, iyadoo wixii xilligaas ka dambeeya uuu xilka la wareegi doono danjiraha cusub ee QM, Michael Keating.
Ban Ki-Moon ayaa uga mahadceliyay Nicholas Kay howshii uu soo qabtay intii uu hayay xilka UNSOM ee Somalia, isagoo ku tilmaamay inuu ahaa geesi si hufan howshooda uga soo baxay, uuna shaqeynayay muddo laba sano iyo bar ah oo Somalia ay ku jirtay xaalad adag oo ay barbar socotay isbedel siyaasadeed.
Wakiilka cusub ee xoghayaha guud ee QM uu u soo magacowday Somalia, Keating ayaa imaanaysa xilli Somalia ay ku jirto lagu jiro kala-guur siyaasadeed iyo xoojinta nabadda dalka; wuxuuna ergaygani uu ahaa tan iyo sannadkii 2012-kii agaasimaha Chatham House.